Soo dejisan Unreal Commander 3.57.1470 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaUnreal Commander
Bogga rasmiga ah: Unreal Commander
Unreal Commander – maamulaha faylka labo-laab ah oo bixiya maareyn tayo badan oo faylasha iyo faylasha marka la barbardhigo Windows Explorer ee caadiga ah. Nidaamku wuxuu qaban karaa dhammaan noocyada shaqada ee caadiga ah, sida nuqul, muuqaal, isbedel, guurid iyo tirtirid. Taliyaha Aasaasiga ah wuxuu la shaqeeyaa qaababka xayeysiiska ee caanka ah si loo akhriyo loona badalo, waxaa ku jira macaamil FTP-dhisay oo wuxuu leeyahay tiknoolajiyad jajaban iyo hoos u dhac ah. Shaqooyinka dheeraadka ah ee taliyaha Unreal waxaa ka mid ah raadinta faylasha, kooxaynta magaca, xisaabinta qiyaasaha hoosta hoose, jadwalka tusmooyinka, kormeerka DOS, hubinta CRC ish, iwm. Barnaamijka wuxuu la shaqeeyaa WLX, WCX iyo WDX khidadaha oo kuu ogolaanaya si nabdoon u tirtirto faylasha. Taliyaha "Unreal" ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad bedesho qaabka dhexdhexaadinta, oo ay ku jiraan qaybaha midabka ee faylasha iyo xarfaha dhamaanba qaybaha isdhexgalka.
Raadinta sare ee faylasha
Kala soocista faylasha iyo faylasha
Taageero loogu talagalay qaababka aruursiga caanka ah
La shaqee deegaanka deegaanka
Soo dejisan Unreal Commander
Faallo ku saabsan Unreal Commander
Unreal Commander Xirfadaha la xiriira
Tani waa tifaftire diiwaangashan oo buuxa oo taageera tabs badan ee isbarbardhigga, sifududka raadinta horumarsan iyo qalab goynta.
DVD PixPlay – softiweer si loo abuuro slideshows oo natiijooyinka loogu duubo saxannada. Software-ka waxaa ku jira aalado kala duwan oo lagu habeeyo habka abuuritaanka.